WARBIXIN: Wasiiradda & Xildhibaanada Puntland oo mushaarkooda kororsanaya, Dhaqaale darro laga cawday & XOG cusub
November 10, 2019 NEWS 1
GAROOWE(P-TIMES) – Warsidaha PuntlandTimes wuxuu helay macluumaad ku saabsan Mushaar kordhintii ugu sareysay oo loo sameeyey Xildhibaanada iyo wasiiradda Puntland, taas oo la doonayo in lagu soo daro miisaaniyada sannadka 2020-ka oo ay hadda diyaarisay wasaaradda Maaliyadda loona gudbinayo golaha Wasiiradda todobaadka dambe.
Nuqul qoraaleed qabyo ah oo loo diyaariyey in loo gudbiyo golaha Wasiiradda Puntland kulamadooda ugu soo horeeya, oo ay heshay PuntlandTimes waxaa ku cad in mushaar-kordhin loo sameeyey oo kaliya golayaasha Wasiiradda & Mudanayaasha baarlamaanka.
Mushaarka wasiir kasta oo katirsan Xukuumadda Siciid Deni ee waqtigan, waxaa la gaarsiiyey lacag dhan 3000kun oo dollar, taas oo ka dhigan in la kordhiyey 100% mushaarka golaha wasiiradda oo horey u ahaa wax ka dhan 1000 dollar.
Xildhibaan kasta oo katirsan baarlamaanka Puntland ayaa hadda mushaarkiisa cusub noqonayaa sida ku cad miisaaniyada 2,500 oo dollar, waxaana horey mushaarka baarlamaanku u gaarayay 1,500 Dollar, waxaana la kordhiyey wax ka badan 60%.
Waa markii koowaad ee abid la kordhiyo tirro intaas le’eg mushaarka wasiiradda iyo Xildhibaanada, waxaana la rumeysan yahay in ay ka mudan tahay in la kordhiyo adeegyada asaasiga ah.
Amarka mushaar kordhinta ayaa la rumeysan yahay in uu yahay mid kasoo baxay Wasiirka Maaliyadda, laakiin wali looma gudbin aqbalaada golaha Wasiiradda, oo la doonayo in dhawaan la horgeeyo Miisaaniyadan.
Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa marar badan sheega in ay dhaqaale la’aan hayso Xukuumadiisa, balse mushaar kordhintan haddii ay isku raacaan golayaasha ayaa ka dhigan in ay tahay lacag badan oo soo gashay deegaanadaas.
In ka badan $400,000 kun oo dollar ayay noqonaysaa mushaaraadka Wasiiradda & Baarlamaanka oo kaliya, taas oo ka dhignaan doonta in miisaaniyada Puntland isbedel weyn ku dhici doono, waxaana si weyn isha loogu hayaa miisaaniyada la horgeynayo baarlamaanka.
Kordhintan, waxay ku beegmi doontaa iyadoo aan wali la ansixin Xisaabxirkii wasaaradda Maaliyaddu ay soo gudbisay ee 2018-ka oo ay diideen golaha baarlamaanka, waxayna ka mid ahayd arrimihii keenay in isku shaandheyn xoog leh lagu sameeyo wasaaradda Maaliyada, Hanti Dhawrka iyo tagidii Mooshinkii gudoomiyaha baarlamaanka Dhooba-Daareed oo muujiyey isla xisaabtam dhameystiran.
Cabaase maxamed says:
Waxaan kutalin lahaa hadaan arintu ahayan..(xabag barshi nin gacanta kuhaya bay Ku bur burataa) waxaa mudan in mushaharka loo kordhiyo ciidanka .iyo shaqaalaha hoose.. sidoo kale waxaa horumarin ubaahan caafimaadka Wax barashada iyo Biyaha.meelahaas ayaa fiira ubaahan.
Sidoo kale waxaa iyana jidha xaquuq maqan taas oo Ka maqan shaqaale xiligii Haas yaaba waa in meel lasaaro.